Aro loza amin’ny faritra avo :: Hotsirihina ny toetoetran’ireo vatobe eny Manjakamiadana • AoRaha
Aro loza amin’ny faritra avo Hotsirihina ny toetoetran’ireo vatobe eny Manjakamiadana
Hijery mialoha ny fomba hisorohana ny loza mety hiseho eny amin’ny faritra avo mano­didina an’i Manjakamiadana ny Biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC. Amin’ny alalan’ ny fizahana ny toetoetran’ireo vato maniry any ambanin’ny tany no hanatanterahana izany mba hahafantarana mialoha ny mety hisian’ny loza na tsia.
Hotsirihina avokoa ny mikasika ny fahapotehan’ny vato, ny mety ho fivakisany sy ny sisa. Mandritra ny iray volana no hanaovana an’izao asa fitsirihana hiarahan’ny BNGRC sy ny mpiara-miasa aminy izao. Manodidina ny telo kilaometatra manodidina no hisian’ny fanadihadiana ary any amin’ny telopolo kilaometatra ambanin’ny tany no ho voatsirika.
“Aorian’ny fitsirihana no mety hahalalana, ohatra, raha betsaka ny rano mahatonga ireo vato hita maso misy mitriatra sy ny sisa”, araka ny fanazavan’ny Dr Andriamirado Lalah, teknisiana eo anivon’ ny BNGRC nandritra ny fanombohan’ny asa fitsirihana, teny Manjakamiadana, omaly.
Notsindrian’ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny Biraom-pirenena fa tsy mahasakana velively ny fisian’ny loza izao fitsirihana hatao izao. “Tsy azo sorohana ny fisian’ny loza voajanahary fa ny fiarovana sy fomba hanalefahana ny fiantraikany no atao. Tanjona ny tsy fiandrasana ny loza hiseho vao mihetsika”, hoy kosa ny kolonely Andriakaja Elack Olivier, sekretera mpanatanteraky ny BNGRC.
Etsy an-danin’izany nanamafy ihany koa ireo tompon’ andraikitra fa mbola mitoetra ho tandindonin-doza iny faritra avo eny Manjakamiadana iny na eo aza izao fitsirihana izao.
“Manamafy ny fahafantarana ny tena zava-misy ao ambanin’ny tany ity fitsirihana ity satria tomba-maso amin’ny alalan’ny fampiasana kajimirindra momba ny sarin-tany na ny “SIG” no nanaovana izany teo aloha. Ny tsara ho fantatra, rehefa hita fa tandindonin-doza ny toerana misy ny trano onenana, dia tokony hiala amin’izany ireo mponina voakasika”, araka ny filazan’ny Dr Andriamirado Lalah.
Tsiahivina fa efa ela no nanamafy ny maha faritra mena ny eny amin’ny mano­didina an’i Manjakamiadana ny avy amin’ny BNGRC.
Taorian’ny loza niseho teny Tsimialon­jafy sy Ampamarinana ireny kosa dia efa miverina mipetraka tsikelikely amin’ny tranony ireo mponina eny en-toerana.
Fitetezana sekoly :: Hamangy ny ESCA Antanimena ny vata feno boky
Ady amin’ny asa ratsy sy hosoka :: Mihatra ny fanapahana an’ireo finday tsy manana laharana IMEI